समाचारमा आउने काइदा
आफूलाई कसरी मार्केटिङ गर्नुपर्छ, प्रियंका कार्कीलाई सबैभन्दा राम्ररी थाहा छ । व्यावसायिक होस् वा व्यक्तिगत, समाचारमा आउने काइदा उनलाई थाहा छ । अहिले भने प्रियंकासँग बेच्ने एउटै कुरा छ । त्यो हो, उनको विवाह ।
इन्गेजमेन्ट गरेको वर्षदिन बितिसक्दा पनि प्रियंका र आयुष्मान देशराज श्रेष्ठको विवाहको छेकछन्द थिएन । जबकि इन्गेजमेन्ट गरेको दुईतीन महिनापछि नै विवाहको मिति तोकिएको थियो । भनेको समयमा नगरेपछि मिडियाले प्रश्न सोध्ने नै भयो । उनले भन्दिइन्, ‘आफन्तको समय मिलिरहेको छैन । यो वर्ष हुन्न, अर्को साल ।’
प्रियंकाले मिडियालाई यो जवाफ दिएको महिनादिन मात्र नाघेको छ । तर, अचानक ब्याचलर्स पार्टी मनाउन बैंकक पुगेको फोटो आयो । ब्याचलर्स पार्टी त्यतिबेला मनाइन्छ, जब विवाहको मिति तय हुन्छ । ब्याचलर्स पार्टी मनाइन्, मतलब विवाह गर्ने भइन् । तर, कहिले ? मिडियालाई अर्को तनाव । प्रियंकाले फेरि सूचना दिइन् । फागुन । तर, फागुन कति गते ? मिडिया प्रियंकाको नयाँ सूचना कुरिरहेको छ । सबैभन्दा पहिला विवाह हुने समाचार आयो, त्यसपछि फागनुमा हुने कुरा आयो र अब आउनेछ ठ्याक्कै मिति । गजब छैन त प्रियंकाको विवाह बेच्ने काइदा !